ब्रेथलाइजर मेसिन बिग्रेपछि सुँघेर मापसे चेक गर्न बाध्य छन् ट्राफिक प्रहरी ! « News24 : Premium News Channel
ब्रेथलाइजर मेसिन बिग्रेपछि सुँघेर मापसे चेक गर्न बाध्य छन् ट्राफिक प्रहरी !
डोटी । जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त प्रविधि र सामग्री नहुँदा समस्या भइरहेको जनाएको छ । डोटीमा ट्राफिक प्रहरीका लागि भएको एकमात्र ब्रेथलाइजर मेसिन बिग्रेको छ । यही कारण मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र प्रहरीबीच विवाद हुने गरेको छ ।
बिग्रेका मेसिन मर्मतका लागि क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरीया पठाएको लामो समय भइसक्दा नपठाउँदा डोटी ट्राफिक प्रहरीलाई जाँचमा समस्या भएको बताइएको छ । ब्रेथलाइजर मेसिन नहुँदा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकको मुख सुँघेर मादकपदार्थ सेवन गरे नगरेका बारेमा पत्ता लगाउन बाध्य भएका छन् ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार चालकको मुख सुघ्ने विषयमा कहिले काही त ठूलै विवाद उत्पन्न हुने गर्दछ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी दिपायलका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक मोहनसिंह धाँमीले जिल्लाभरिमा एकमात्र ब्रेथलाइजर मेसिन भएको र त्यो पनि बिग्रेर थन्किएको बताए । उनले भने, “जिल्लाभरिमा एउटा मात्रै मेसिन थियो, त्यो पनि बिग्रेकाले मर्मतका लागि पठाएका छौँ, बनेर आएको छैन ।”
जिल्लामा ब्रेथलाइजर मेसिन किन्नका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दिपायलले सबै स्थानीय तहमा आग्रह गरे पनि उक्त मेसिन किन्नका लागि रकम कहीँकतैबाट नआएको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ । “करीब रु २० हजारमा किन्न सकिने उक्त मेसिन नहुँदा यहाँका ट्राफिक प्रहरीलाई निकै समस्या हुँदै आएको विषयमा सबै निकायमा खबर गरे तर कसैले किन्ने प्रयास गरेरनन्”, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मोहनसिंह धाँमीले भने, “सबैका लागि काम लाग्ने मेसिन किन्नलाई के दुःख, मेसिन नहुँदा हामी नै बिरामी पर्ने बेला भइसक्यो ।”